JUUK Velo, suun bir ah oo tayo leh oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch | Wararka IPhone
JUUK Velo, oo ah suun bir ah oo tayo leh oo loogu talagalay Apple Watch-kaaga
Ma qarin karo xaqiiqda ah in markay timaado xarkaha Apple Watch, kuwa birta ah shaki la’aan aniga ayaa ugu cadcad, halkaasna soo saare ayaa ka sarreeya inta kale: JUUK. Buugyadeeda sii kordheysa ee moodooyinka iyo midabada, waxay horey u leedahay moodel kale oo diyaar ah oo dhowaan bilaabi doona rarka dhammaadka bishan Janaayo:.
Lagu sameeyay aluminium oo laga heli karo midabbo kala duwan, Moodalkan JUUK wuxuu adeegsadaa mid ka mid ah naqshadaha ugu caansan ee suumanka isku xira, nooca aan waligiis ka bixin qaabka, wuxuuna ku darayaa xoogaa midabyo geesinimo leh si ay u jiraan xulashooyin loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Kadib markaan awooday inaan tijaabiyo noocyada kala duwan ee JUUK (Revo, Iftiimin y Vitero) waxaan kaliya sifiican ugahadli karnaa xarigyadan birta ah ee aadka ufiican ee loogu talagalay Apple Watch in soo-saarahaani uu daryeelo xitaa faahfaahinta ugu yar, isagoo aan ka hinaasin xarkaha qiimaha leh ee Apple lafteedu iibiso saacadaheeda. Markan wuxuu doortay naqshad casri ah, laakiin nuunisyo ka dhigaya wax gaar ah., sida iskuxirayaasha leh qalooc yar oo ka dhigaya suunka mid raaxo leh in la xidho iyo natiijada qurxinta ayaa ka fiican.
Ka samaysan 6000 Taxanaha Aluminium, xargaha Velo waxay si fiican ugu habboon yihiin dhammaan moodooyinka 42mm waxaana lagu heli karaa midabyo kala duwan: Ruby (casaan), Saqbadh dhexe (buluug), Obsidian (dhalaalaya madow), Cosmic Gray (mugdi madow) iyo Silver (qalin). Labadan midab ee ugu dambeeya ayaa ah kuwa ku habboon Apple noocyadiisa cawl iyo qalin, halka kuwa kalena ay ku guuleystaan ​​midab kala duwanaan leh oo cajiib ah. Qiimaheedu waa $ 119, laakiin inta lagu jiro bisha Janaayo haddii aad isticmaasho lambarka xayeysiinta "velo10" waxaad helaysaa qiimo dhimis 10% ah.. Xarkahaas waxaa laga heli karaa oo keliya bogga rasmiga ah ee soosaaraha xidhiidhkan, waxayna u rartaan adduunka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » JUUK Velo, oo ah suun bir ah oo tayo leh oo loogu talagalay Apple Watch-kaaga
Dukaan Apple ah oo ku yaal Switzerland ayaa laga raray batari dartiis
Falanqeeyayaashu waxay u dhigaan LG inay sameeyaan tikniyoolajiyadda Aqoonsiga 'Apple ID'